အမြန်ရလဒ်များအတွက်အကောင်းဆုံးချောင်းဆိုးဆေး - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ပြင်းထန်သောအားကစား ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေး ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး နှိပ်ပါ မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ရပ်ရွာ ရပ်ရွာ၊ ကျန်းမာရေး သတင်း၊ ဖျော်ဖြေရေး ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> အကောင်းဆုံးချောင်းဆိုးဆေး
cougCoughs တစ်ခုဖြစ်သည် အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက် လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အဓိကကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူကိုတွေ့တယ်။ ချောင်းဆိုးခြင်းအများစုသည်အများအားဖြင့်အအေးမိခြင်း (သို့) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းကြောင့်အဝေးရောက် (OTC) ချောင်းဆိုးဆေးများနှင့်အိမ်တွင်းကုထုံးများသည်ပြusuallyနာကိုများသောအားဖြင့်ဖြေရှင်းသည်။ သို့သော်ချောင်းဆိုးခြင်းသည်အဖျားတက်ခြင်း (သို့) ၃ ပတ်ကြာသည်အထိဖြစ်လျှင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်နှင့်ဆေးညွန်းသည့်ချောင်းဆိုးဆေးတို့ကိုပင်လျှင်သင်၏မူလစောင့်ရှောက်မှုဆရာဝန်ထံသွားရန်အရေးကြီးသည်။
ရံဖန်ရံခါချောင်းဆိုးခြင်းသည်သာမန်ဖြစ်သော်လည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားသည့်ချောင်းဆိုးခြင်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေ၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ချောင်းဆိုးခြင်းသည်လေကြောင်းမှအလွန်အကျွံထုတ်လွှတ်သောအရာနှင့်နိုင်ငံခြားအလောင်းများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရည်ရွယ်သောခုခံကာကွယ်သည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြင်းထန်ပြီးမကြာခဏချောင်းဆိုးခြင်းသည်သင်၏ဘဝအရည်အသွေးကိုသိသိသာသာထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အအေးမိ: အအေးမိခြင်းသည်နှာခေါင်းနှင့်လည်ချောင်း (အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ) ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုမခံစားရဘူးပေမယ့်ဒါဟာများသောအားဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။ ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်းလူများသည်အအေးမိခြင်းမှပြန်လည်သက်သာလာသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါကူးစက်မှု: ဤသည်မှာအအေးမိခြင်းအတွက်နောက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပါးစပ်သို့မဟုတ်နှာခေါင်းထဲရောက်သောအခါဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများကိုထောက်ရှု။ ၎င်းသည်ထိခြင်း၊ နှာချေခြင်းသို့မဟုတ်ချောင်းဆိုးခြင်းမှတဆင့်ကူးစက်သည်။
တုပ်ကွေး တုပ်ကွေး သင့်ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တုပ်ကွေးရောဂါကိုအများအားဖြင့်တုပ်ကွေးဟုခေါ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဝမ်းရောဂါနှင့်အော့အန်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောအစာအိမ်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်မတူပါ။ နှစ်စဉ်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးသည် ၁၀၀% ထိရောက်မှုမရှိသော်လည်း၎င်းသည်တုပ်ကွေးရောဂါကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။
bronchitis: Bronchitis သည်သင်၏အဆုတ်နှင့်လေမှလေကိုသယ်ဆောင်ရန်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အသုံးပြုသည့်အဓိကလမ်းကြောင်းများဖြစ်သောသင်၏ bronchial tubes ၏နံရံရောင်ခြင်းကိုရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ bronchitis ရှိသူများသည်မကြာခဏအရောင်ချွတ်နိုင်သောအထူချွဲကိုချောင်းဆိုးစေသည်။ bronchitis ဖြစ်နိုင်သည် စူးရှသော သို့မဟုတ်နာတာရှည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်လေ့ရှိပြီးတခါတရံတွင်အအေးမိခြင်းသို့မဟုတ်တုပ်ကွေးဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကြောင့်ဖြစ်တတ်သော်လည်းအချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တတ်သည်
ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အအေးမိရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့ထဲမှအနည်းငယ်မှသာရောဂါလက္ခဏာများကိုလျင်မြန်စွာကုသနိုင်သည်။ အဓိကအမျိုးအစားများမှာ -
ချောင်းဆိုးဖိနှိပ် (လည်းခေါ်။ ) တိုက်ဖျက်ရေး ) ချောင်းဆိုးခြင်းတုံ့ပြန်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊ Dextromethorphan (DM) သည်ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက်အသုံးအများဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ချောင်းဆိုးခြင်းသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ စိတ်ကြွဆေးခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါသို့မဟုတ်နာတာရှည် bronchitis ကြောင့်ဖြစ်လျှင်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုမသုံးသင့်ပါ။ Antististines သို့မဟုတ် decongestants တွေဟာလည်ချောင်းကိုခြောက်သွေ့စေပြီးချွဲကိုပိုထူလာပြီးလှုပ်ရှားရခက်စေပြီးပိုမိုပြင်းထန်သောချောင်းဆိုးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
မျှော်လင့် ရင်ဘတ်တွင်ရှိသောချွဲကိုဖြေလျှော့ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ပါးလွှာခြင်းကြောင့်ချောင်းဆိုးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ ရေပန်းစားသောဥပမာတစ်ခုမှာ guaifenesin ဖြစ်သည်။ အပိုအရည်ကိုသောက်ခြင်းကလည်းကူညီနိုင်သည်။
ပေါင်းစပ်ဆေးဝါးများ ချောင်းဆိုးသူများနှင့်အခြားတက်ကြွသောပါဝင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းကုသရန်ဆေးမသွင်းသည့်ဆေးဝါးများ၊ အအေးမိခြင်းမှချောင်းဆိုးခြင်းကိုကုသရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုမှာအအေးမိဆေးနှင့် antongistamine ဆေးနှစ်မျိုးလုံးပါသောအအေးမိဆေးဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့်အအေးမိခြင်းရောဂါကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူထံသို့မသွားဘဲကုသနိုင်သည်။ သင့်ဆေးဆိုင်တွင်ဆေးညွှန်းမပါဘဲသင်ဆေးဝါးဖြင့်သောက်နိုင်သည်။ လူကြိုက်များသော OTC အချို့၊ ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက်မြန်ဆန်သောကုသမှုများပါဝင်သည်။
Pseudoephedrine: နှာခေါင်းပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာစေသော OTC ဆေးတစ်ခု။ လူကြိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ် Sudafed ဖြစ်ပါတယ်(Sudafed ကူပွန် | Sudafed ဆိုတာဘာလဲ။ )။ ၎င်းသည်သွေးတိုးစေနိုင်သောကြောင့်ဆူဖာဖာသည်သွေးတိုးသို့မဟုတ်အခြားနှလုံးပြproblemsနာများရှိသူများကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာယားယံခြင်း၊ မှတ်ချက်။ ဤပြည်နယ်အတွက်ဆေးညွှန်းလိုအပ်သောပြည်နယ် ၂ ခုရှိပြီးပြည်နယ်တိုင်းသည်ဆေးဆိုင်ကောင်တာ၏နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ သင်ဝယ်ယူရန် ID ကိုပြရမည်။
ဂွာအန်ဖင်း မကြာခဏ၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် Mucinex အားဖြင့်လူသိများ(Mucinex ကူပွန် | Mucinex ကဘာလဲ။ )guaifenesin သည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုအအေးမိခြင်းမှသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သောတစ်ခုတည်းသော OTC ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရင်ဘတ်ပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာစေရန်အလုပ်လုပ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန် pseudoephedrine နှင့်ပေါင်းစပ်လေ့ရှိသည်။ Guaifenesin သည်ပါးလွှာသောချွဲကိုကူညီပေးသည်၊ အချွဲသို့မဟုတ်ပါးလွှာလျှင်ချောင်းဆိုးရန်လွယ်ကူစေသည်၊ ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်ချောင်းဆိုးရောဂါနှင့်ဖျားနာသောအခါအရည်များများသောက်ခြင်းသည်လည်းအသုံးဝင်ပါသည်။
Dextromethorphan ဖြေ - ဦး နှောက်ထဲကအချက်ပြမှုတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ချောင်းဆိုးဖိနှိပ်ခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။ Dextromethorphan ကိုချောင်းဆိုးရောဂါကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ရည်၊ ဆေးတောင့်၊ ဆေးတောင့်၊ ဆေးညွန်းဆေးနှင့်ဆေးညွှန်းပေါင်းစပ်ဆေးများစွာတွင်တွေ့ရသည်။ အသုံးအများဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Robafen Cough (Robitussin) နှင့် Vicks Dayquil Cough တို့ဖြစ်သည်။ ၄ နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအတွက်အကြံမပေးပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူသောက်သုံးသောဆေးသည်ဆေးချက်သည်ချက်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုးချဲ့ခြင်းရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ ၂၄ နာရီအတွင်းအများဆုံးသောက်သုံးမှုသည် ၁၂၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။
နာကျင်မှုသက်သာစေသူများ: Tylenol (acetaminophen)(Tylenol ကူပွန် | Tylenol ကဘာလဲ)နှင့် Advil (ibuprofen)(Advil ကူပွန် | Advil ဆိုတာဘာလဲ?)နှစ် ဦး စလုံးထိုကဲ့သို့သောအဖျားနှင့်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုလျှော့ချအဖြစ်အအေးနှင့်တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာများ, သက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
ဆက်စပ် : Mucinex vs Sudafed
OTC ချောင်းဆိုးဆေးများသည်သင့်အတွက်အသုံးမပြုနိုင်ပါကသင်၏ရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွားလာလျှင်သို့မဟုတ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါကသင့်ဆရာဝန်ကကူညီရန်ဆေးကိုညွှန်းနိုင်သည်။ ချောင်းဆိုးခြင်း၏အများဆုံးသောအကြောင်းရင်းများမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်များကြောင့်အများဆုံးဖြစ်သဖြင့်သင်၏မိသားစုဆရာဝန်သည်မည်သည့်ပiotိဇီဝဆေးကိုမဆိုချောင်းဆိုးကုသမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပrepိဇီဝဆေးများကို strep လည်ချောင်းကဲ့သို့သောဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုများအတွက်သာအသုံးပြုသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအမည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်အကြံပြုလိုပါသလား? ကလေးများအတွက်ထောက်ခံပါသလား ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
Codeine ကလေးငယ်သည် opioids အပေါ်မှီခိုရပြီး၊ မိခင်နို့မှတဆင့်ကူးစက်နိုင်သည်။ အမှတ် ၂၀၁၈ တွင်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် codeine ကိုဆန့်ကျင်သည် FDA ။ Opioid ချောင်းဆိုးဖိနှိပ်။
Tessalon ပုလဲ (benzonate) N / A – FDA ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးအစား C (သန္ဓေသားကိုထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း၊ ရင်သားကင်ဆာနို့ကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်းရှိမရှိမသိရှိပါ) ။ မဟုတ်ပါ၊ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်ကလေးများကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုမပါဘဲမပေးပါနှင့်။ ဒါဟာကလေးများအတွက်ဆိုးဝါးနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အဆုတ်နှင့်လည်ချောင်းဒေသများကိုရေတွက်ပြီးအလှည့်အနေဖြင့်ချောင်းဆိုးခြင်းတုံ့ပြန်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။
Tussionex PennKinetic (hydrocodone-chlorpheniramine) N / A – FDA ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးအစား C (သန္ဓေသားကိုထိခိုက်မှုရှိမရှိ၊ ရင်သားနို့ရည်သို့ကူးစက်လျှင်မသိရ) ။ ကလေးငယ်များသည်မူးယစ်ဆေးအပေါ်မှီခိုလာနိုင်သည်။ သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပါ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်များမသုံးရ။ Hydrocodone သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိချောင်းဆိုးရောဂါလက္ခဏာများကိုလျှော့ချပေးသောချောင်းဆိုးနှိမ်နင်းခြင်းဖြစ်သည်။ Chlorpheniramine သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ histamines များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့် antihistamine ဖြစ်သည်။
ကွမ်းခြံကုန်း (promethazine) N / A – FDA ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးအစား C (သန္ဓေသားသို့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လျှင်ရင်သားကင်ဆာနို့ကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်းရှိမရှိမသိပါ) ။ ဟုတ်တယ်။ ၎င်းသည်အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်သတိဖြင့်ဆေးထိုးနိုင်သည်။ ချောင်းဆိုးဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မှအစာဟောင်းရောဂါ။
Hydromet (hydrocodone-homatropine) မဟုတ်ပါ။ ကလေးငယ်သည် opioids အပေါ်မှီခိုနိုင်ပြီး၊ မိခင်နို့မှတစ်ဆင့်ဆေးကိုကူးစက်နိုင်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်များမသုံးရ။ Opioid ချောင်းဆိုးနှိမ်နင်းခြင်းနှင့် antihistamine ။
Codeine နှင့်အတူ Phenergan (Promethazine-codeine) မဟုတ်ပါ။ ကလေးငယ်သည် opioids အပေါ်မှီခိုနိုင်ပြီး၊ မိခင်နို့မှတစ်ဆင့်ဆေးကိုကူးစက်နိုင်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်များမသုံးရ။ Opioid ချောင်းဆိုးနှိမ်နင်းခြင်းနှင့် antihistamine ။
Hydrocodone-acetaminophen မဟုတ်ပါ။ ကလေးငယ်သည် opioids အပေါ်မှီခိုနိုင်ပြီး၊ မိခင်နို့မှတစ်ဆင့်ဆေးကိုကူးစက်နိုင်သည်။ ဟုတ်တယ်။ ၎င်းသည်အသက် ၂ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်သတိဖြင့်ဆေးထိုးနိုင်သည်။ Opioid ချောင်းဆိုးနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုသက်သာခြင်း။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းသို့မဟုတ်နို့တိုက်နေစဉ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဆေးဝါးများပေးအပ်ခြင်းမပြုမီမည်သည့်ဆေးကိုမသောက်သုံးမီသင့်ဆရာဝန်နှင့်ပြောဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည် အသက် 12 နှစ်အောက်ကလေးများ ။
ချောင်းဆေးကိုရည်၊ အမှုန့်များ၊ ဆေးပြားများ၊ ဆေးတောင့်များနှင့်နှာခေါင်းမှုန်ရေမွှားများအပါအ ၀ င်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြိုက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကလေးများသည်အထူးသဖြင့်လည်ချောင်းနာ။ အနာများကိုသောက်ရန်ခဲယဉ်းကြသဖြင့်ရည်သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ချောင်းဆိုးရည်: လူကြီးများနှင့်ဆေးများထက်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာသက်သာလိုသောကလေးများအတွက်၊ အလွန်လည်ချောင်းနာခြင်းဝေဒနာခံစားရသူများနှင့်ဆေးပြားကိုမျိုချရန်အခက်အခဲရှိသောကလေးများအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
အမှုန့် ရည်နှင့်ဆင်တူ။ ၎င်းသည်ဆေးကုသမှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ကူညီပေးသည်၊ ကလေးများအနေဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ချောင်းဆိုးခြင်း - ချောင်းဆိုးဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့်ကူညီသည်။ များသောအားဖြင့်ချောင်းဆိုးခြင်းသည် menthol (သို့) ပျားရည်ကဲ့သို့သောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်လည်ချောင်းနာခြင်းကိုသက်သာစေသည်။
သင်၏ချောင်းဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေရန်ဆေးဝါးများများစွာရှိသော်လည်းအိမ်တွင်သင်ဆေးဝါးမလိုအပ်သည့်အပြင်အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည့်အရာများစွာရှိသည်။ ချောင်းဆိုးဆေးများတွင် -
အရည် - အရည်သည်သင်၏လည်ချောင်းရှိချွဲများကိုပါးလွှာစေသည်။ ဟင်းရည်၊ လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ဖျော်ရည်ကဲ့သို့သောပူနွေးသောအရည်များသည်သင့်လည်ချောင်းကိုသက်သာစေသည်။
ချောင်းဆိုးခြင်း - သူတို့ကခြောက်သွေ့တဲ့ချောင်းဆိုးရောဂါကိုသက်သာစေပြီးလည်ချောင်းနာခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ menthol၊ သံပုရာ၊ သွပ်၊ ဗီတာမင်စီနှင့်ပျားရည်တို့ပါ ၀ င်သည့်သဘာဝမျိုးကွဲများစွာရှိသည်။
ပျားရည်: ပျားရည်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းကိုပူနွေးသောရေထဲသို့သံပရာနှင့်ရောစပ်ပြီးအပိုသက်သာစေပါသည်။
အငွေ့သို့မဟုတ်စိုထိုင်းဆ လေထဲသို့အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်းကသင့်အားရှူရှိုက်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ နံနက်ယံ၌သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရေနွေးငွေ့ခန်းကိုသင်၏ရေချိုးခန်းတံခါးကိုပိတ်ထားကာမှန်ထဲမှာမြူသည်အထိမိနစ်အတော်ကြာရေချိုး။ ရေထဲတွင်ရေပူထည့်နိုင်သည်။ ရေနွေးငွေ့သည်သင့်နှာခေါင်းနှင့်ရင်ဘတ်ကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ညနေပိုင်းတွင်ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ပြည့်နှက်နေသောညကိုမရှောင်ရှားရန်ညနေခင်းတွင်သင်၏အိပ်ခန်းတွင်အငွေ့ပျံစေခြင်းသို့မဟုတ်စိုထိုင်းဆကိုသုံးနိုင်သည်။
ဆေးဝါးမဟုတ်သည့်ဆားငန်ပေါက်များ - သင်၏နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းကိုဆေးဝါးမဟုတ်သောဆားပေါက်များဖြင့်ဖြန်းခြင်းသည်ချွဲကိုသန့်ရှင်းစေပြီးနှာခေါင်းကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်နှာခေါင်းယိုခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဂျင်း: ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောသက်ရောက်မှုကြောင့်လူသိများသောဂျင်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေသည်ဟုယူဆကြသည်။ ချင်းလက်ဖက်ရည်သောက်ရန်ပါးနပ်သောအချပ်အချို့ကိုပူနွေးသောရေထဲသို့ထည့်ပါ။
များသောအားဖြင့်အဝေးထိန်းများနှင့်အိမ်တွင်းဆေးများသည်စိတ်တိုလွယ်သောချောင်းဆိုးခြင်းကိုထိထိရောက်ရောက်တိုက်ဖျက်နိုင်သော်လည်းချောင်းဆိုးခြင်းဆက်ဖြစ်နေလျှင်သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားလာပါကသင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်ချိန်းဆိုသင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ကလေးများကိုမပေးမီ၊ မည်သည့်ဆေးများကိုမဆို OTC သို့မဟုတ်ဆေးညွှန်းများဖြစ်စေသောက်သည့်အခါသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်တိုင်ပင်ရန်အမြဲတမ်းကောင်းပါသည်။
Torsemide vs. Lasix: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
Viibryd vs. Lexapro - ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
ဗီတာမင်ဒီသည်ဗီတာမင်ဒီ ၃ နှင့်တူသည်